Flim2MM: The Saint (2017)
သူတပါးပစ္စည်းခိုးယူတယ်ဆိုတာ မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ အင်းဝခေတ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ရေဝန်းအရပ်က သူခိုးကြီး ငတက်ပြား ကိုတော့ ချစ်ခင်လေးစားကြကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ မခိုးရ မနေနိုင်တဲ့ စောရနက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး မွေးလာလို့ ခိုးယူပေမယ့် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ခိုးယူကြောင်း ဖတ်ဖူးပါတယ်။ The Saint ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာလည်း လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့ သူခိုးဇာတ်ကောင်ကို ပီပြင်အောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်။
The Saint ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်း ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာလည်း Return of The Saint ဆိုပြီး ထပ်ပြီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်တည်ထားချင်းတော့ မတူကြပါဘူး။ ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ မှာ အဆုံးသတ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြား ရုပ်ရှင်အဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ Adam Rayner နဲ့ Eliza Dushku တို့က ဦးဆောင်ပါဝင်ပြီး ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် James Bond မင်းသားဟောင်းကြီး Roger Moore ပါဝင်ထားပါတယ်။ (၁၉၆၂ ကားမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ The Saint ကားမှာ Roger Moore က အဓိကဇာတ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်)
နိုင်ဂျီရီးယား သမ္မတက နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ၂.၅ ဘီလီယံ ပျောက်ဆုံးသွားတာကို လိုက်ရှာရတာပါ။ သူတောင်စင်သူခိုးက ဒီကိစ္စကို ပြေလည်အောင် ဖန်တီးရင်း သူ့ငယ်ဘဝက အဖြစ်မှန်တွေကိုပါ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားက သူခိုးတစ်ယောက်နဲ့ James Bond ပေါင်းထားသလိုမျိုးကို ကြည့်ရမှာပါ။ နောက်ခံတီးလုံးတွေကလည်း လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အက်ရှင်သီးသန့်မဟုတ်ပေမဲ့ ဟာသဆန်ဆန်ပြောကွက်တွေကလည်း မငြီးအောင် ဆွဲခေါ်သွားမှာပါ။ <"Fair" is something created by the weak> ဆိုတဲ့ ဒဿနဆန်တဲ့ အပြောတွေလည်း ပါလို့ ကြည့်ရတာ တန်ပါတယ်။
မှတ်ချက် - စည်းကမ်းမဲ့ခိုးနေတဲ့ သူခိုးကြီးတွေရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - #flim2mm
[FORMAT]:………………………….:) WEB / 720p HQ
[GENRE]:……………………….… .:) Action, Adventure, Crime
[FILE SIZE]:…………………….….:) 787 MB
[Translate By]:……………………..:) R!B
G Drive HD Large
Posted by Y Junction at 7:10:00 AM
လောင်ကျွမ်းစေသော နှင်းဆီ - Kularb Fai (2013) Episo...
လောင်ကျွမ်းစေသော နှင်းဆီ - Kularb Fai (2013)